Mkpa Pro 4 Vs Surface Pro 3 | Akụkọ akụrụngwa
Surface Pro 4 Vs Surface Pro 3, duel na anyanwụ nke ndị dike abụọ
Villamandos | | Ngwa
Fewbọchị ole na ole gara aga, Microsoft nyere iwu na mmemme emere na New York City ọhụrụ Na Pro 4, ọhụụ ọhụrụ nke otu n'ime ngwaọrụ ya kachasị mma na nke ahụ bụ ọzọ ngwakọ ngwaọrụ n'etiti mbadamba na laptọọpụ, zuru oke maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ. O doro anya na onye ọhụrụ a nke Surface bụ nnukwu ngwaọrụ, nke juru ihe karịrị otu anya site na njirimara ya na nkọwa ya, nke a na-atụ anya ka ọ nweta ọnụ ọgụgụ ahịa pụtara ìhè.
Seemslọ ọrụ ndị Redmond yiri ka ha mụtara site na mmejọ ya na mbata nke a 4 Mkpa ha ga-enye ndị ọrụ ihe niile ma ọ bụ ihe niile ha chọrọ. Taa na inweta echiche banyere mgbanwe nke akụrụngwa a wetara ka anyi tunyere ya na Mkpa Pro 3, na duel na anyanwu nke ndi Refeyim.
Ọ bụrụ n ’ị na-eche inweta ngwaọrụ ma ọ bụ n’ ọ bụrụ n ’ị chọrọ ịmata mmelite na ozi ọma etinyegoro n’elu Mbepụ ọhụrụ 4, gaa n’ihu na-agụ maka na anyị kwenyesiri ike n’isiokwu a nke akpọrọ Surface Pro 4 Vs Surface Pro 3, duel in anyanwụ nke Refeyim abụọ ị ga-achọ ịmasị gị n'akụkụ hà.
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ nyochaa isi atụmatụ na nkọwa nke ngwaọrụ abụọ:
1 Elu Pro 3 atụmatụ
2 Elu 4 atụmatụ
3 The processor, otu n'ime iche
4 Ihuenyo, ibu na Gorilla Glass 4
5 Ọnụahịa ọnụahịa nke Surface Pro 4 na Spain
Elu Pro 3 atụmatụ
Akụkụ: 292,1 x 201,4 x 9,1 mm
Arọ: gram 800
Ngosipụta: ClearType nke 12-anụ ọhịa nwere mkpebi nke 2160 x 1440 na nchekwa Gorilla Glass 3. Njupụta pixel nke 216
Processor: Intel Core nke anọ gen. (i4, i3, i5)
Ncheta RAM: 4 ma ọ bụ 8 GB
Nchekwa ime: 64GB, 128GB, 256GB ma ọ bụ 512GB
Netianya: Wi-Fi 802.11ac 2x2 na 802.11a / b / g / n Bluetooth 4.0 LE
Njikọta: 1 USB 3.0 zuru ezu, Obere DisplayPort, microSD agụ, isi okwu isi, Coverdị mkpuchi ọdụ na ọdụ njikọ.
Batrị: ihe ruru euro 9 nke ịntanetị
Sistemụ nrụọrụ: Windows 8.1 Pro free upgradeable na Windows 10
Elu 4 atụmatụ
Akụkụ: 1 x 201.4 x 8.4 mm
Arọ: gram 766 - gram 786
Ngosipụta: 12,3-anụ ọhịa PixelSense nwere mkpebi nke 2736 x 1824 na nchekwa Gorilla Glass 4. Njupụta pixel nke 267
Processor: Intel Core nke isii. (m6, i3, i5)
Ncheta RAM: 4GB, 8GB ma ọ bụ 16GB
Nchekwa dị n'ime: 128GB, 256GB, 512GB ma ọ bụ 1TB
Batrị: ruru euro 9 nke nnwere onwe na-egwu vidiyo
Sistemụ nrụọrụ: Windows 10 Pro
Banyere imewe, ihe ole na ole agbanweela na nke ahụ bụ Surface Pro 3 na Surface Pro 4 bụ otu na ogologo na obosaraNaanị ụdị ọhụụ ahụ ahụla etu esi belata ya site na 0,7 millimeters, ihe na-adịghị mma. Nbelata oke a agaghị egbochi anyị iji ngwa ndị anyị nwere na nke anyị.
Ihuenyo ahụ etoola ọ bụ ezie na ọ dịkwa nleghara anya na nke ahụ bụ na mkpokọta mmụba nke nha bụ sentimita 0,3. Maka akụkụ ya, ibu nke ngwaọrụ ahụ pere mpe, mana ọ bụghị eziokwu iji buru oke n'uche. Banyere ọdịdị dị na mpụga, ọ ga-esi ike ịmata nke ngwaọrụ bụ Mkpa Pro 3 na nke bụ Mkpa Pro 4.
The processor, otu n'ime iche
Enweghị ọtụtụ iche iche anyị nwere ike ịchọta na Surface Pro 4 ma e jiri ya tụnyere mbipute gara aga, mana otu n'ime ha bụ ihe nhazi. Na bụ na Microsoft ngwaọrụ ọhụrụ na-abịa onwem na nso nke isii ọgbọ processors si Intel enwe ike ịhọrọ n'etiti Core m3, Intel Core i5 ma ọ bụ Intel Core i7. Ndị nhazi na Mbepụ Pro 3 dị elu, mana ọ bụ ọkwa dị n'okpuru nke ngwaọrụ ọhụrụ ahụ site na Redmond.
RAM na nchekwa dị n'ime ya bụ akụkụ ndị ọzọ anyị nwere ike ịhọrọ karịa kpamkpam na Pro Pro Pro 4. Site na 8 GB nke anyị nwere kachasị na Mbepụ Pro 3 anyị agaala na 16 GB nke ga-enye anyị nnukwu ike nke ga-enye anyị ohere ịrụ ọrụ ọ bụla ma jiri ngwa ọ bụla.
Banyere nchekwa dị n'ime, ohere dị na a Mkpa Pro 4 nke na-enye anyị ihe ruru 1 TB, na-aga site na 128 GB, 256 GB na 512 GB. Na Surface Pro 3 anyị nwere ike ịnwe 500 GB nke nchekwa dị n'ime nke ụfọdụ n'ime ọtụtụ ndị ọrụ dị mkpụmkpụ.
Ihuenyo, ibu na na Gorilla Glass 4
Ihuenyo nke Surface Pro 4 ọhụrụ a buru ibu karịa, ma e jiri ya tụnyere nke Surface Pro 3, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka onye ọrụ ọ bụla. Nnukwu mmelite nke ihuenyo na-ebikarị na nchebe ya ma ọ bụ ya oge a ka echekwara ya na ozodimgba Glass 4, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe a na-apụghị ibibi ebibi.
Improvementsfọdụ mmelite ndị ọzọ anyị nwere ike ịchọta na Surface Pro 4 a gbasara Surface Pro 3 bụ keyboard nke na-enye gị ohere ịpị ngwa ngwa na obere mkpọtụ, yana trackpad ọ dịghị ihe ọzọ na ihe na-erughị 40% buru ibu, yana nnukwu uche , na multitouch na-amata ihe ruru 5 dị iche iche.
Ọnụahịa ọnụahịa nke Surface Pro 4 na Spain
Lee, anyị gosiri gị ọnụahịa ndị isi nke ọhụrụ Surface Pro 4 na Spain na ha adịchaghị iche na Suraface Pro 3, mgbe e rere ya;
128 GB / Intel Core m3: 4 GB Ram: euro 999
128 GB / Intel Core i5: 4 GB Ram: euro 1.099
256 GB / Intel Core i5: 8 GB Ram: euro 1.449
256 GB / Intel Core i7: 8 GB Ram: euro 1.799
256 GB / Intel Core i7: 16 GB Ram: euro 1.999
512 GB / Intel Core i7: 16 GB Ram: euro 2.449
Kedu ihe ị chere banyere Mkpa Pro 4 a ma e jiri ya tụnyere Surface Pro 3 gara aga?. You nwere ike inye anyị echiche gị gbasara ya na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ na otu n'ime netwọkụ mmekọrịta ebe anyị nọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Surface Pro 4 Vs Surface Pro 3, duel na anyanwụ nke ndị dike abụọ
Ọfọn, na-atụle ọdịiche ole na ole dị n'etiti SP3 na SP4, echere m na oge eruola ịzụta SP3 na ọnụ ala.
Echere m na ọdịiche dị na ọnụahịa dị mkpa karịa njirimara ya, nke na-eme SP3 ịzụrụ ka mma.
Njehie 7 nke ị na - ekwesịghị iji ekwentị ọhụrụ gị mee
Kedu ihe blọọgụ IT na teknụzụ kachasị mma?